जापानमा भर्खर आउनु भएकाहरुले कल्चर शकबाट कसरि बच्ने । | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > जापानमा भर्खर आउनु भएकाहरुले कल्चर शकबाट कसरि बच्ने ।
जापान अध्ययनको शिलशिला होस् वा कामको शिलशिला होस, अलि लामो समय बस्ने आउने सबैले कल्चर शक पक्कै भोग्नु भएको होला।हजुरको घर वा ठाउमा सामान्य लाग्ने कुरा जापानमा गर्दा अभद्र हुने वा हजुर को तिर असभ्य मानिने कुरा यहाँ सबैले गर्ने देख्दा पक्कै पनि अचम्म लाग्दछ। एक त नया ठाउमा सेट हुने समय लाग्दछ, त्यो माथि त्यो ठाउको संस्कृति, चाल चलन, यी कुराहरुले धेरैलाई दिक्क बनाउन सक्दछ। अनि भाषा बोल्न नजान्नेहरुलाई त घुलमिल हुन निकै समस्या पर्दछ। अंग्रेजी धेरै नबोलिने जापानमा हजुरलाई प्रत्यक पाईलामा भाषाको अज्ञानताले सताउछ। रेस्टुराण्टमा होस् वा वर्ड अफिसमा, सुपरमार्केटमा होस् वा ट्रेनमा जापानी भाषा जता तेती प्रयोग गरिने भएकोले बोल्न नआउनेहरुलाई अनेकौ समस्या आइपर्छ। तर पनि हजुरलाई केहि कुरा ध्यान दिनु भयो भने, हजुरको जापानको बसाई सहज हुनेछ। के हुन् त यी कुराहरु आउनुहोस् आजको यो लेखमा हजुरहरुलाई कल्चर शकबाट कसरि बच्ने भन्ने बताउछौ।
१. जापानिज भाषा पढ्न हरेक दिन केहि समय छुटाउनुस
यहाँ पढ्न र भबिस्यमा काम गर्नहरुले त जापानी भाषा सिक्ने पर्ने हुन्छ। तर यदि हजुर यहाँ केहि महिनाको लागि मात्र आउदै हुनु हुन्छ भने पनि यहाँको भाषा सिक्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। कुनै देशको भाषा सिक्नु भनेको हजुरले त्यो देश प्रति देखाउने न्यूनतम आदर हो। हजुरको बसाईको फरेक दिन थोरै समय भए पनि जापानी भाषा सिक्न छुटाउनुहोस। हजुरलाई लाग्न सक्छ, जापानी भाषा सिक्न निकै गारो छ। तर पनि सामान्य जापानी भाषा जुन हजुर दैनिकीमा प्रयोग गर्नु हुन्छ, त्यो सिक्न तेती गारो छैन। आफै सोच्नुसन रेस्टुराण्टमा हजुरलाई वेटरलाई बोलाऊनु पर्दा सुमीमासेन मात्र भन्न सिक्नु भयो भने पनि टोलाएर वा अन्य ईशाराले बोलाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना हुदैन। हजुरले जापानी भाषा सिक्न मोबाइल एपको प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ।
२. लोकल ग्रोसरी वा सुपरमार्केट जाने गर्नु होस्
हजुरको खान्कीले हजुरले सोचेको भन्दा निकै असर गरिरहेको हुन्छ। जापानमा बाहिर खान निकै सजिलो छ। यहाँ बाटो पिछे कम्बिनी र रेस्टुराण्ट भएकाले खानाको समस्या हुदैन। तर पनि सदै बाहिर खादा हजुरलाई फ़्रस्ट्रेसन हुन सक्दछ। त्यसैले दिनको एक छाकको खाना घरमै बनाउने कोशिस गर्नु होस्। हजुरलाई लाग्न सक्छकि जापानमा ग्रोसरी निकै महँगो छ। तर बाहिर खानु भन्दा घरमा खान निकै सस्तो पर्न पनि आउछ। अनि अर्को कुरा कुकिङ्गले मानिसको स्ट्रेस कम गर्न मद्दत गर्दछ। स्टेसन नजिकै स्रोसरी स्टोर हुने भएकोले जानुहोस। त्यहाँ हजुरले आफ्नो घरतिर पाउने थुप्रै सामान भेट्न सक्नु हुनेछ। आफुलाई मनलागेको खाने भरपर्दो उपाय भनेको आफै बनाएर खाने हो।
हरेक दिन थोरै भएपनि व्यायाम गर्ने गर्नु होस्। जापानमा जिम जान महगो पर्न सक्छ। सस्तो प्रिभेट जिम पनि महिनाको ५००० भन्दा धेरै पर्न सक्छ। तर हजुर बस्ने वडाको कम्युनिटि जिम सस्तो हुने हुनाले हजुरले त्यहाँ गएर व्यायाम गर्न सक्नु हुनेछ। कम्युनिटि जिममा पनि धेरै सामान हुने हुनाले पक्कै पनि मनपराउनु हुनेछ। अथवा बिहान बिहान जगिंग गर्ने बानि बसाल्नु होस्। जापानीहरु बिहान बिहान दौडिने गर्दछन। के थाह हजुरले कोइ साथी बनाईहाल्नु हुन्छ कि ?
४. सामाजिक क्रियाकलापमा भाग लिनुहोस्।
सामाजिक क्रियाकलापमा भाग लिनु भयो भने हजुरले जापानिज भाषा चाढो सिक्नु हुनेछ। कामको होस् वा स्कुलमा होस् जापानिज साथि बनाउने मौका खोज्नु होस्। त्यति मात्र नभएर जापानीहरु पनि अंग्रेजी बोल्न खोजिरहेको मानिसहरु हुने हुनाले इन्टरनेटमा त्यस्ता ठाउ र सोसल सेन्टर भेट्न सक्नु हुनेछ। युनिभर्सिटि पढ्नु हुन्छ भने स्पोर्ट्स क्लब जोइन गर्नु होस् , त्यहाँ हजुरले जापानी संग घुलमिल हुने राम्रो मौका पाउनु हुनेछ।
५. लोकल रेस्टुराण्ट र बारमा रेगुलर जाने गर्नु होस्
धेरै मानिसहरु जापानी खानाको कुरा गर्दछन। तर थोरैले मात्र त्यहाँ कामगर्ने मानिसको कुरा गर्दछन। लोकल रेस्टुराण्ट ओनर, वेटर, बार्टेण्डर हरु धेरै मिहेनती र मिजासिला हुन्छन। उनीहरु बाट हजुरले धेरै कुरा सिक्न सक्नु हुनेछ। उनीहरुको रेस्टुराण्टमा रेगुलर आउन थाल्नु भयो भने हजुरहरुले पक्कै पनि उनीहरुको अनुभबको कथाहरु सुन्न पाउनु हुनेछ। यो पनि एउटा जापानको संस्कृति संग घुलमिल हुने तरिका हो। रेगुलर आउनेहरुले विशेष सेवा पनि पाउदछन।
६. आफ्नो एक्स्पेक्टेसनलाई धेरै माथि नराख्नु होस्
अन्तिम कुरा कल्चर शक भनेको जापान बसाइ आउने भन्दा पनि यो देशबाट हजुरले राख्ने अनेकौ एक्स्पेक्टेसनले गर्दा आउछ। जापान आउदा अपत्यारिलो र धेरै आशा राखेर नआउनुहोस्। हजुर ३ महिनामा जापानी भाषा सिकेर धेरै जापानी साथि बनाएर राम्रो बोल्ने सक्ने आशा राख्नु होला तर त्यसको ठिक बिपरित हुन सक्नेछ। हजुरले जापान बसाइको प्रत्यक हप्ता राम्रो संग प्लान गर्नु भएको होला तर सबै प्लान हजुरले कोर्नु भएको जस्तो नहुन पनि सक्छ। हुन पनि आफ्नो जापान बसाईको समय निकै रमाइलो बनाउने सबैको सोच हुन्छ। तर यी कुरालाई धेरै एक्स्पेक्टेसनले बाधा पुर्याउन नखोज्नु होस्।
कहिले कहिँ कतै घुम्न जाने प्लान क्यान्सिल भयो भने घरको काम गर्नु होस्। रुम सफा गर्नु होस्। रुम को ले आउट चेन्ज गर्नु होस्। कहिले टिभि हेर्नु होस् त कहिले साथिहरुलाई बोलाएर घरमा सानो पार्टी गर्नु होस्। आफ्नो परिवार मिस गर्नु भयो भने फोन गर्नु होस्। भिडियो कल नजिक भैरहने राम्रो मध्यम हो। बाहिर निस्किनुहोस। आफ्नो नजिकको लोकल पार्क जानुहोस्। जापानमा थुप्रै कुराहरु छन् जसले हजुरलाई जापानमा घुलमिल गर्न मद्दत गर्नेछ।